Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo » I-Seychelles kwindawo ebonakalayo kuMnyhadala oBonakalayo wase-Italiya
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zase-Itali eziQhekezayo • iintlanganiso • iindaba • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Iziqithi zeSeychelles zabekwa kwindawo ebonakalayo ngexesha lomhla oququzelelwe yiOfisi yoKhenketho yaseSeychelles e-Itali ngoSeptemba 26, 2021.
Iindwendwe zase-Italiya eziphethe iGreen Pass esemthethweni ngoku zinokuya eSeychelles ngokuvalelwa bodwa kunye neemfuno zokwahlukaniswa ekubuyeni kwabo e-Itali.
Olu phuhliso lutsha lukhulise ukhenketho lwaseSeychelles njengoko luthathe inxaxheba kwisiganeko.
Inxalenye yomnyhadala womsitho ibandakanya amabhaso anje ngendawo yohambo lokuziqhelanisa neparadesi.
Ukubonelela ngeqonga lokukhuthaza indawo ekuyiwa kuyo kwintengiso yase-Italiya kunye nokudibana norhwebo, umsitho ungqamane nesibhengezo ngu-Mphathiswa Wezempilo wase-Italiya wolindelwe kakhulu ipaseji yokhenketho eya eSeychelles ethi Ekugqibeleni izakuvumela abahambi abasuka kule ngingqi ukuba bandwendwele eli chwebakazi.
Ngokwentuthuko entsha, iindwendwe zase-Italiya eziphethe iGreen Pass esemthethweni ngoku zinokuya eSeychelles zibekelwe bucala zize zibekelwe bucala ukubuyela e-Italiya, ukuba nje bezisa uvavanyo olubi lwe-PCR olwenziwe kwiiyure ezingama-48 ngaphambi kokuhamba kwaye benze iswabi yokugqibela xa befika kwisikhululo seenqwelomoya e-Itali.
Umsitho uvumele iqela ukuba lihlaziye urhwebo ngale mithetho mitsha kwaye lonyuse ukuzithemba kweearhente zokuhamba ezilinde ngolangazelelo ukuqala ukuthengisa indawo esiya kuyo kwakhona.
Ababekhona njengomboniso kulo msitho yayingamaqabane aliqela, angala, iiBerjaya Hotels Seychelles, iiCreole Travel Services, iIthiopiya Airlines, iiSeychelles ezine zokuHlala ngeeSeason, iGo World Tour Operator, iNorth Island Luxury Resort, iParadise Sun Tsogo Sun Iihotele, iQatar Airways, iRaffles Seychelles, IiNdawo zeeNdawo neeNdawo ekuchithelwa kuzo iiholide.
USuku oluSebenzayo lweSeychelles lwabanjelwa iqonga lobuchwephesha elinikezelweyo apho umntu ngamnye othatha inxaxheba ebene-avatar yobuqu enokuthi ihambe ijikeleze izitendi kwaye inxibelelane nababonisi kunye nomnye nomnye. Ukongeza kunxibelelwano, ababonisi babenakho ukwabelana ngeentetho, iividiyo, kunye nokulayisha izinto zokwazisa.
Amabhaso awonwabisayo, kubandakanya indawo kuhambo lokuziqhelanisa neparadesi, babenikezelwa, nge-Quiz apho abathathi-nxaxheba kwafuneka bagcwalise imephu kunye neentlobo zezilwanyana nezilwanyana zaseSeychelles.
UDanielle Di Gianvito, uMmeli wezoKhenketho eSeychelles Tourism e-Itali, uphawule wathi: “I-Seychelles inemincili yokwamkela abakhenkethi base-Itali abafuna ikhefu lokuphumla kunye namava angasoze alibaleke - besisebenza rhoqo kufutshane nendawo yokuhlala, iinqwelomoya kunye nabaqhubi bezokhenketho ukuphuhlisa nokulungiselela ukufumana abakhenkethi bamazwe aphesheya, abathi ngoku, ekugqibeleni, babandakanye amaTaliyane athande le ndawo intle kangaka. Lo msitho ube yimpumelelo enkulu kwaye ukhuthaze isiqalo esitsha. ” Umsitho uye walandelwa yimisebenzi eliqela kwimarike yase-Italiya, ebonakalayo kunye neyomzimba.
Abatyeleli baseSeychelles kufuneka bazalise ifom yesigunyaziso sohambo seychelles.govtas.com kwaye ubonise ubungqina bovavanyo olubi lwe-PCR kwiiyure ezingama-72 ngaphambi kohambo oluya kwindawo oya kuyo.
I-Seychelles yenye yeendawo zokuqala ukuvulela ngokupheleleyo iindwendwe ngaphandle kokuthintela ubume bango-Matshi ophelileyo kulandela inkqubo engqingqwa yokugonya eyathi yabona uninzi lwabantu bayo begonyiwe. Sele iqalile ngoku ukulawula idosi yokunyanga iPfizerBioNTech kubantu abadala kunye nokugonya ulutsha. Inani lezehlo ze-COVID-19 lehle kakhulu kwezi veki zidlulileyo kwaye zimbalwa kakhulu iimeko ezenzeka kubakhenkethi.